प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विप्लवले सोधे : बन्दी रिहाइ कहिले गर्ने ? – ramechhapkhabar.com
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विप्लवले सोधे : बन्दी रिहाइ कहिले गर्ने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवबीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न विप्लव उनको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा उनले सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न ढिला भएको बताएका विप्लव समूहका नेता उदयबहादुर चलाउनेले बताए ।
विप्लव समूह र सरकारबीच गत फागुन २० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका विप्लव समूहका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो । सोमबारको भेटमा विप्लवले उक्त सहमति कार्यान्वयनमा ढिला भएको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेता कार्यकर्ता रिहाइका लागि आफूहरु लागिरहेको जवाफ दिएका नेता चलाउनेले जानकारी दिए ।
रेशम चौधरीसहित थारु नेताको मुद्दा खारेजी माग गर्दै माइतीघरमा धर्ना
प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ । थारु कल्याणकारी सभा र थरुहट/थारुवान संघर्ष सिमित लगायतले आइतबारबाट धर्ना सुरु गरेको हो। धर्नामा सहभागीहरुले रेशम चौधरीसहित अर्का थरुहट नेता लक्ष्मण थारु लगायत, अन्य थारूहरुमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएको भन्दै उनीहरुले त्यस घटनासँग जोडेर जेलमा राखिएका सांसद रेशम चौधरी सहितलाई रिहाइ गर्नुपर्ने थारु हरुको माग छ । धर्नाको अगुवाइ गरिरहेका थारु कल्याणकारी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटना त्यहाँका थारुहरुले नभइ सीमा पारीबाट आएका अराजक व्यक्तिहरुले घटाएको दावी गरेका छन् । थारु हरु निर्दाेष भएकाले उनीहरुमाथि मुद्दा लगाउने, थुन्ने गर्नु अन्याय भएको प्रेमीलालको भनाइ छ ।
सरकारले झुठा मुद्दा लगाएका कारण धेरै थारुहरू विस्थापित भएको, कोही जेलमा रहेको उनी बताउछन् । सो समयमा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले समेत थारुहरु निर्दाेष रहेको बताइसकेकाले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने चौधरीको माग छ । माग सम्बोधन नहुँदासम्म हरेक दिन धर्ना चलिरहने प्रेमीलालले जानकारी दिए ।